आस्था राउत छुटेपछि सुगम पोखरेलले भने : बाघ पल्केको छ, पालो मेरो पनि हुनसक्छ ! - Sidha News
आस्था राउत छुटेपछि सुगम पोखरेलले भने : बाघ पल्केको छ, पालो मेरो पनि हुनसक्छ !
काठमाडौ। अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी गायिका आस्था राउत चार हजार धरौटी बुझाएर रिहा भएकी छन् । आस्था राउत रिहा भए संगै गायक सुगम पोखरेलले एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै बाघ पल्केको छ पालो जसको पनि आउँछ भनेका छन् ।